Dad Adeegsada Whatsapp Oo Weerar Culus Lagu Qaaday - Ilays News
[ June 1, 2020 ] Daawo :- 12-Kii KM Ee Ugu Horeeyey Jidka Berbera Corridor Oo Xadhiga Laga Jaray	Featured
Dad Adeegsada Whatsapp Oo Weerar Culus Lagu Qaaday
Budhcadda internetka ayay u suuragashay in iyaga oo meel kale jooga ay software basaasid loo adeegsado ku shubaan WhatsApp oo fariimo la isaga diro.
WhatsApp oo ay leedahay shirkadda Facebook ayaa sheegtay in arrintan lagu bartilmaameedsaday lambarrada “tiro la xushay” ayna soo qaadeen qolo “ku dheeraysa weerarrada dhanka internetka”
Jimcihii ayaa mashiinnada WhatsApp laga saaray fayraskaas.
Qayb ka mid ah softwerka fayraska loo adeegsaday ayaa la sheegay in ay samaysay NSO Group oo ah shirkad Israa’iil laga leeyahay, sida uu ku warramay wargeyska Financial Times.
Isniintiina dhammaan dadka isticmaala WhatsApp oo gaaraya 1.5 bilyan oo ruux ayaa taxadar ahaan loogu baaqay in ay cusboonaysiiyaan App-kooda.
Habacsanaanta ka jirtay WhatsApp ayaa ahayd mid aad u saraysa. Dadka weerarka soo qaadayna waxay bartilmaameedsanayeen dadka ay rabaan iyaga oo ka wacaya WhatsApp.
Xataa haddii lagu soo waco oo aadan ka jawaabin, fayraska ayaa galayay Appka, barnaamijkaas ayaana sahlayay in la adeegsado maykarafoonka iyo kaameerada taleefanka aad WhatsApp ka isticmaalayso.
Lambarkii lagaa soo wacay ee barnaamijkaas loo adeegsaday ayaana ka tirmayay qaybta wicitaanka oo caadiyan laga tixraaci karo qofkii ku soo waca, sida uu ku warramay wargeyska FT.
WhatsApp ayaa BBC-da u sheegtay in koox ammaanka qaabilsan oo WhatsApp ka shaqeysa ay arrintan ogaatay qiyaastii toban maalmood ka hor.
Intaas ka dibna waxay ku wargaliyeen ururrada xuquuqda aadanaha u dooda, khuburada dhanka ammaanka iyo laamaha sharci fulinta iyo waaxda caddaaladda ee dalka Maraykanka.
“Weerarka waxaa ku suntan shirkad gaar loo leeyahay oo la sheegay in ay la shaqayso dawladaha si ay u helaan qalab basaasid oo lagula wareegi karo habka uu taleefanku u shaqeeyo” Sida ay sheegtay shirkadda oo si kooban ula hadashay saxafiyiinta.
Yaa ka dambeeya farsamada ama software la adeegsaday?
Shirkadda NSO Group oo Israa’iil laga leeyahay ayaa horay loogu eedeeyay in ay leedahay “farsamooyin weerarro loogu gaysan karo dhanka internerka”.
Barnaamijkeeda ugu caansan ee Pegasus ayaa awooda in uu aruuriyo xogta ku jirta taleefannada lagu bartilmaameedsado, macluumaadkaas waxaa ku jira xog laga qaadan karo microfonka iyo kaameerada taleefanka iyo waliba goobta uu ruuxu ku sugan yahay.
War qoraal ah oo ka soo baxay ayaana lagu sheegay in ay baaritaan ku samaynayso warka soo yeedhay, balse waxay intaas ku dartay in aysan qaadi karin masuuliyadda sida loo isticmaalay waxyaabo ay dawladdo ka iibisay oo loogu talagalay in lagula dagaallamo dambiyada iyo argagixisada.
War qoraal ah oo ka soo baxay NSO ayaa lagu sheegay in tiknoolajiyaddooda ruqsad loo siiyo hay’adaha dawladda ujeedda loo sameeyayna ay tahay in wax looga qabto dambiyada iyo argagixisada.
“Shirkaddu qalabka kuma hawlgasho, marka ruqsado badan iyo baaritaan la sameeyana, sirdoonka iyo hay’adaha sharci fulinta ayaa go’aamiya sida ay tahay in loo adeegsado tiknoolajiyaddaas, si ay gacan uga gaysato ammaanka bulshadooda. Eedaymo kaste oo la taaban karo oo sheegaya in si xun loo isticmaalay baaritaan ayaan ku samaynaa, jawaab ayaana ka bixinnaa, waxaana dhici karta in aan hawada ka saarno software-ka.